Barnaamijka biyaha iyo fayadhowrka ee CISP
| Biyaha iyo Fayadhowrka |
Tan iyo 2009kii, iyada oo qayb ka ah barnaamijkeeda ballaaran ee lagu taageerayo bulshooyinka beeraleyda-xoolo-dhaqatada ah ee gobollada Galgaduud iyo Mudug, CISP waxaa dadaal dheeri ah ay ku bixineysey la-socoshada sida ay biyaha u helaan dadka iyo xoolaha, taas oo hadafka laga leeyahay ay ahayd in si dad ku filan wax looga qabto dhibaatooyinka ba’an, iyada oo sidoo kale wax laga qabanayo culeysyada muddada fog. Iyada oo xaaladaha abaarta ay ka sii dareen, ayaa CISP waxa ay si weyn kor ugu qaadeysaa dadaallada lagu wanaajinayo helidda biyaha. Laga soo bilaabo bishii Jannaayo 2011, CISP waxaa ay wax ka qabaneysey abaarta ba’an ee Koonfurta Galgaduud iyo degaamada xeebaha ah ee Koonfurta Mudug (degmooyinka Ceel Dheer, Xarardheere iyo Hobyo), halkaas oo maciishadda degaanku ay si weyn u saameeyeen roobabka yar iyo isbeddelo degdeg ah oo cimilada la xiriira. Roobabkii Deyrta ee baaqdey ayaa waxaa ay saameyn ku yeeshaan degaan ay deggan yihiin qiyaastii 67,000 qof oo ay haleeleen Dhibaatooyin Ba’an oo Cuntada iyo Maciishadda la xiriira iyo 18,000 qof oo u baahan gargaar bani’aadamnimo, sida ay muujisey khariidadda FAO ee Dadka Maciishaddoodu Beeraha-xoolo-dhaqashada ku dhisan tahay.
2010kii, waxqabadka CISP ee Galgaduud iyo Mudug waxaa ka mid ahaa:
10 ceel gacmeed, laba goobood oo biyaha lagu keydiyo iyo hal ceel-dhuun (riig) oo la qodey;
11 Guddiyada Biyaha ah oo lagu tababarey daaweynta, dayactirka iyo maareynta goobaha biyaha laga dhaansado;
Koloriin iyo qalab dayactir oo la siiyey 11 goobood oo miyiga ku yaalla;
20,000 ka-faa’iideystayaal (kuwaas oo 50% ay haween yihiin iyo 15% ay barokacayaal yihiin) oo la gaarey;
In ka badan 7.5 litir maalintii ayaa la siiyaa ka-faa’iideyste kasta;
1,200 qof oo dad nugul ah ayaa ka-qaybqaatey hawlaha dayactirka iyo dhisidda ee CISP, kuwaas oo ka faa’iideystey lacag shaqo lagu beddesho.
Sanadka 2011ka CISP waxaa ay dayactirtey ayna daaweysey:
12 haamood oo biyaha lagu keydiyo.
Dhisidda iyo dayactirka goobaha biyaha laga dhaansado, ceel-gacmeed, ceel-dhuun (riig) iyo tas-hiilaad biyo lagu keydiyo;
bixinta qalab iyo koloriin lagu daweeyo biyaha;
Dhisidda iyo tababarka Guddiyada Biyaha ee Bulshada, oo hawshoodu tahay maareynta iyo daaweynta biyaha;
Lacag shaqo ku beddelesho;
Dayactirka iyo dhisidda tas-hiilaadka fayadhowrka (musqulo iyo adeegyada gacmo-dhaqashada), u kala gaar ah ragga iyo haweenka, wiilasha iyo gabdhaha, loo dhisey xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka bulshada;
Degaamada magaalooyinka ah ee martigeliya barokacayaasha oo la siiyey tubooyin iyo haamo biyaha lagu keydiyo.
Home Barnaamijka Biyaha iyo Fayadhowrka